ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ဖို့တော့လိုမယ် | FOX Sports Myanmar
ကဲ . . . မြန်မာယူ-22 အသင်းရဲ့ ဆီးဂိမ်းခရီးက ခုထိတော့ ဟုတ်နေတာပဲ။ မလေးနဲ့ ၁-၁၊ ဖိလစ်ပိုင်ကို ၂-၁ နောက် တီမောကို ၃-၁ ဆိုတဲ့ ၂ပွဲနိုင် တစ်ပွဲသရေ (၃)ပွဲကစားပြီးချိန်မှာ အမြင့်ဆုံးရနိုင်ချေ ၉ မှတ်မရခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအမြင့်ဆုံးရနိုင်ချေ (၇) မှတ်ကတော့ သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင် ဖြစ်နေပြီ။ နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ (90%) လောက်ကိုသေချာသွားပါပြီ။ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ် ကစားတဲ့အခါမှာ သရေကျရင် အုပ်စုက တက်ဖို့ ကြိမ်းသေပါတယ်။ အနိုင်ရရင် အုပ်စုဗိုလ် ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်း များပြီး ကမ္ဘောဒီးယားကို ရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အခွင့်အရေးရှိနေသေးတာကြောင့် အုပ်စုက တက်ဖို့ (၉၀%)ရှိတယ်လို့ပြော နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရလဒ်ဟာ မြန်မာဘောလုံးကိုစိတ်ပျက်နေတဲ့ ပရိသတ်ပြည်သူတွေအတွက် စိတ်ချမ်းသာမှု အပြည့် အ၀ ပေးနိုင်တဲ့ရလဒ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ရလဒ်ကတော့ မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်း အုပ်စုအဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရ သွားပါပြီ။ ဒါဆို ခြေစွမ်းကစားပုံက ဘယ်အထိမှန်းနိုင်မလဲ။ ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လား။ မျှော်လင့်ချက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။
အဲ . . . ဒါကတော့ စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်သွားပြီ။ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ် သေတော့မသေချာဘူးပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ။ အားကစားမှာ သေချာပေါက်ဆိုတာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားရမှာက ပကတိအခြေအနေပါ။ ပြောရရင် ကိုယ့်ထက်ပိုအင်အားကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိနေတယ်။ ကံကူပါမှ ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုတာ အားလုံးလက်ခံရမှာပါ။ ကံကူရုံနဲ့ရော ဖြစ်ပါ့မလား ဆိုတဲ့သံသယအတွေးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ရှိလည်းရှိသင့်တယ် လေ။ ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အလဲလဲအကွဲကွဲတွေကြုံခဲ့တဲ့အကြိမ်ရေက သက်စေ့တောင်ဖြစ်လောက်ပြီဆိုတော့ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လို လေးသံကြားတိုင်းစိုးထိတ်နေတာ အပြစ်မရှိဘူးပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကံကူရုံနဲ့တော့ မလုံလောက်ဘူး ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအယူအဆမှာ အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့ သော့ချက်က တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အောင်မြင်မှုတိုင်းရဲ့သော့ချက်က “ကံ+ဥာဏ်+၀ီရိယ” ဆိုတာမဟုတ်လား။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကံနဲ့ ဥာဏ်ကို ခဏထားပြီး ၀ီရိယဆိုတဲ့ဖက်ကို ခဏတွေးကြည့်ရအောင်။ လက်ရှိအသင်းရဲ့ အခြေအနေ. . .။ ဒီအနေအထားနဲ့ခြေစွမ်းကို အားရပြီ ကျေနပ်အားရပြီလား။ အားရတဲ့သူရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်က တော့အားမရပါဘူး။ လက်ရှိခြေစွမ်းက ဒီအသင်းမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစ ရဲ့ (၇၀%) သာသာလောက်ပဲရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် ကစားနိုင်တဲ့အရည်အသွေးရှိသလို ပုံမှန်ဆိုတဲ့ခြေစွမ်းအထိကို မရောက်သေးတာ ဒီအသင်းကို အစဉ်တစိုက်ကြည့်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေ သိပါလိမ့်မယ်။ အစွမ်းအစ (၁၀၀%)အပြည့်သာအသုံးချနိုင်ရင် ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့စာရင်းထဲမှာ မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။အရည်အသွေးရှိပြီဆိုရင် အားကုန်စိုက်ထုတ်နိုင်ရင် ၀ီရိယပြည့်စုံပြီပေါ့။ ဒါပေမယ့် ခက်နေတာက အရည်အသွေးကို ရာနှုန်းပြည့်ရအောင် ထုတ်ဖို့ခက်နေတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်း အုပ်စုပွဲ(၃) ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ပြန်ကြည့်ရင် ရာနှုန်းပြည့်ခွန်အား စိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့တာ လက်ခံရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အရည် အသွေးအပြည့်မရခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ။
အရည်အသွေးတစ်ခုရှိလျက်နဲ့ ဒါကို မသုံးစွဲနိုင်ဘူးဆိုတာ ၀ီရိယပိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဥာဏ်ရဲ့ အပိုင်းကိုရောက်သွား ပါပြီ။ မြန်မာယူ-၂၂ အသင်းဟာ အုပ်စုပွဲစဉ် (၃)ပွဲကစားပြီး (၃)ပွဲစလုံးမှာ ဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးရတဲ့အချိန်ကလည်း ပွဲချိန် (၁၀)မိနစ်နဲ့ (၁၇)မိနစ်ကြားပါ။ ဒါဟာ အသင်းရဲ့ Pick up ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြတဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲ(၃)ပွဲလုံးမှာ အဖွင့်ဂိုးရပြီးတဲ့အချိန် ကစားပုံပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ တီမောနဲ့ပွဲမှာ ၂ဂိုးအထိရလိုက်ပြီး ရခဲ့တဲ့ဂိုး (၂)ဂိုးလုံးက နည်းပြသင်ထားတဲ့ အနီးကပ် အတိုပေး ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့ရသွားတာပါ။ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ ဒီလိုကစားပြီး ဂိုးလွယ်လွယ်ရတယ်ဆိုတာ မဟာအခွင့်အရေးပါ ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဂိုး(၂)ဂိုးလွယ်လွယ်ရသွားချိန်မှာ ပုံစံပျက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ အတိုပေးတွဲလုံးတွေဆက်ကစားရင် ဂိုးတွေထပ် ရနေမှာစိုးလို့ထင်ပါရဲ့ အဲဒီပုံစံမကစားတော့ပဲ တစ်ကိုယ်တော်ထိုးဖောက်မှုတွေ အဝေးကန်ချက်တွေနဲ့ အရင်ကမြန်မာ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ဂွါဒီယိုလာနဲ့ပတ်သက်လို့ မန်စီးတီးကစားသမားဒီဘရိုင်းပြောခဲ့တာ သွားသတိရမိတယ်။ ဒီဘရိုင်းက “ပက်ပ်က ကျွန်တော်တို့ကို အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ကစားဖို့တာဝန်ပေးတာပါ။ အဓိကတာဝန်က ဘောလုံးလက်ခံ မယ်၊ ဘောလုံးပေးမယ် ဒါပါပဲ။ မသိရင် ဒီလိုကစားတာက ဘာမှမခက်ခဲသလိုပါပဲ ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုမခက်ခဲမှုကို အချိတ်အဆက် အချိန်ကိုက်ကစားဖို့က တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်” တဲ့။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတီမောနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးရဖို့လိုအပ်တဲ့အချိတ်အဆက်နဲ့ နားလည်မှုကိုရပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို လွယ်လွယ်နဲ့ စွန့်လွှတ်ပြီး “ငါဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့၊ ငါထင်ပေါ်ဖို့” ဆိုတာတွေကို ဦးစားပေးရင်း ပိုခက်တဲ့ဆီကိုရောက်သွားတာပါ။ ပြိုင်ဖက်က တီမောမို့သာပါ။ လာအိုလိုမာကျောတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အသင်းဆိုရင်တောင် (၂-၁) အနေအထားကနေ ဂိုးပြန်မပေးရအောင် အသည်းအသန်ပိတ်ကစားရတော့မယ့်အခြေအနေရောက်သွားမှာပါ။ ထိုင်း၊ အင်ဒို ၊ ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ဆိုရင် မပြောနဲ့တော့။ အခုလာမယ့် (၂)ရက်နေ့ (တနလာင်္နေ့) ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ကစားပြီးရင် ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲ ကစားဖို့ (၅)ရက်တောင်အနားရမှာပါ။ ဒါဟာ “ကံ”တရားဖေးမမှုဖြစ်နိုင်သလို ဒီအခြေအနေကို အခွင့်အရေးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနားရတဲ့ (၅)ရက်မှာ ဘာတွေလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးယူမလဲ။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးအပေါ် အသုံးချနိုင်တဲ့ဥာဏ်ပညာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ခုချိန်မှာပထမဆုံးလုပ်ရမှာ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ပွဲအတွက် ဘာလုပ်မလဲ ဘယ်လိုရလဒ်နဲ့ဆီမီးကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ရည်မှန်း ချက်နဲ့ပြင်ဆင်မှုအတွက် (၂)ရက်အချိန်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီကနေ မြင်တာတွေ့တာလေးလောက်ကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးကြပြောကြတာပါ။ တကယ်လက်တွေ့လုပ်ရတာ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီး တိုင်းဟာ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရှိတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အခက်အခဲတွေရှိလို့ရပ်လိုက်မယ်ဆို ရင်ပန်းတိုင်ကို ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်တော့ဖူးမဟုတ်လား။ အခက်အခဲဆိုတာတွေကို ဦးနှောက်နဲ့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်း ပြီး ကာယခွန်အားနဲ့ တညီတညွတ်ထဲအားထုတ်မယ်ဆိုရင် “ကံကောင်းမှု ”ဆိုတဲ့အရာက အတူတူကပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ ကံဆိုတာ အလုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်လား . . .။
Home Football Asian Football SEA Games ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ဖို့တော့လိုမယ်